EPL: Marcus Rashford oo Man United ka caawiyey inay guul ka gaarto Liverpool, soona degtay kaalinta labaad ee horyaalka. – XOGMAAL.COM
EPL: Marcus Rashford oo Man United ka caawiyey inay guul ka gaarto Liverpool, soona degtay kaalinta labaad ee horyaalka.
Maxaan Kala soconaa qarax goor dhow ka dhacay duleedka Muqdisho??
Ciidamada Ethiopia oo dad rayid ah ku laayey Mooyaale, iyagoona………….
Sawirro:- Kooxda Al-Shabaab Oo Heshiis la gashay Somalia
Ciyaraha Kubadda Cagta ee Degmooyinka Gobolka banaadir oo bilowday
RASMI: Gabriel Jesus oo heshiis cusub u saxiixay Manchester City.
Kuma Jiro Willian: Chelsea oo Stamford Bridge ku celineysa saddex ciyaartooy